FAQ - Shandong Gangting Dianche Co.Ltd
Waxaa si muunad aqbalay?
Haa, si muunad la aqbalo. Waxaad u dhigi karto si raad si ay u qiimeeyaan xirfadaha tayada wax soo saarka iyo been ugu horeysay ee a.
Waxaa si kartoo aqbalay?
Haa, si kartoo waa accepted.we waa ODM iyo OEM company.we ka dhigi kartaa mashiinka accroding aad looga baahan yahay.
Sidee ku saabsan bixinta?
ka dib markii 50% -80% deposit (haddii mishiinka waxaa kartoo, waxaad u baahan tahay in ay bixiyaan 80% deposit, haddii caddadka yar, waxaad u baahan tahay in ay bixiyaan lacag buuxda), waxaan diyaarin doonaa badeecada.
Sidee dheer dheer ansax ah oraah ah?
Ereyga ansax ah oraah waa muddo 30.
Sidee dheer oo muddo dammaanadda?
muddo Guarantee waa hal ama labo sano.
waxaan booqan kartaa warshad?
Haa, dabcan, aan aad u faraxsan, haddii aad booqo warshad.
Sida ay qalab ah oo aad soo iibsatay, waxaynu ka wada hadli doonaa macluumaad dheeraad ah ama technology oo ku saabsan mishiinka aad la, sidoo kale kuu soo diri sawiro ama videos ku saabsan sida loo isticmaalo oo ku xidh.
Sidee baad u dhigi our ganacsi muddada-dheer iyo xiriirka wanaagsan?
1. Waxaan ku hayn oo tayo fiican leh iyo qiimaha tartan rasmi ah si loo hubiyo in macaamiisheena ka faa'iideysan, 2. Waxaan ixtiraamaan macaamil kasta sida saaxiib, waxaana si daacad ah ganacsiga sameeyo oo aad saaxiibo iyaga la, arrinta ma meel ay ka yimaadeen.